Home AKWINGKWỌ UKWUKA FOOTBALL Ndị egwuregwu bọọlụ Bekee Phil Foden Childhood Akụkọ gbakwunyere Ezigbo Ihe Ndị E Dere Ndụ
Akụkọ ndụ anyị nke Phil Foden na-agwa gị Eziokwu gbasara Akụkọ nwata ya, Ndụ mbido, Ezinụlọ, Ndị nne na nna, Enyi nwanyị, Nwunye ka ọ bụrụ, Ndụ, Net Worth na Ndụ Nke Onwe.
Na nkenke, kwatuo akụkọ ihe mere eme nke ndị England na-agba ọsọ. Lifebogger na-eburu gị site na ihe omume dị ịrịba ama site n'oge ọ bụ nwata ruo mgbe ọ ghọrọ onye a ma ama.
Iji mee ka agụụ ịgụ akụkọ ọdịmma gị na-atọ gị ụtọ, nke a bụ kredul ka ebili gallery - nchịkọta zuru oke nke Phil Foden's Bio ..
Mmalite Ndụ na Nbili nke Phil Foden.
Ee, onye ọ bụla maara na a na-ahụta ya dịka otu n'ime ndị ntorobịa kachasị mma na England na-eto eto, yana, onye na-eto eto nwere ndidi nke cherere ka ọ bụrụ onye mbido otu maka City.
Agbanyeghị, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole na-atụle ụdị anyị Phil Foden si Biography nke bụ nnọọ ihe na-akpali. Ugbu a n’enweghị nsogbu ọzọ, ka anyị bido.
Phil Foden Nwatakiri Akụkọ - Mmalite Ndụ na Ezinụlọ:
N'ihi na Biography EBIDO, ọ na-eburu aha otutu “Nwa Pep.”Mgbe amuru ya, aha ya nke nne na nna ya gụrụ ya“Philip Walter Foden”Na obughi“Phil Foden”Dị ka anyị niile maara.
A mụrụ Foden na 28th nke May 2000 na nne ya Claire Foden, na papa Phil Foden Snr, na Metropolitan Borough nke Stockport, United Kingdom.
N'okpuru ebe a bụ foto nke mama ya mara mma ma dịkwa mma na nna ya mara mma-nna.
Zute ndị nne na nna Phil Foden - mama ya bụ Claire Foden, na papa Phil Foden Snr.
Ndị mụrụ Phil Foden nwere “Phil”Dị ka nwa mbụ ha. N'ịbụ onye amụrụ n'ezinụlọ etiti, mana nke Phil, mama, nna ma ọ bụ ndị ezinụlọ ya so na ndị bara ọgaranya na Manchester.
Little Foden nọrọ n'oge mbụ nke afọ ya na Edgeley, bụ obere mpaghara dị na Stockport nke a na-ahụkarị dịka mpaghara zuru oke maka ndị na-akpata ego dị ala na nke etiti.
Amụrụghị nwa amaala na Stockport nke amụrụ site na Manchester dị ka naanị nwa nne na nna ya. Ya na nwanne ya nwanyị tolitere, onye a na-amaghị aha ya n'oge ederede.
N'okpuru ebe a bụ obere foto nke obere Phil Foden na nwanne ya nwanyị nke nwere ike ịbụ afọ ole na ole (1 ma ọ bụ 2) karịa ya.
Little Phil Foden toro na nwanne ya nwanyị.
Ndụ nwata nke Phil Foden na Football: A mụrụ Phil n'ezinụlọ ndị na-akwado ezinụlọ Manchester City FC. Dika nwatakiri, obu onye mmuta ihe mmuta nke mbu choputara inwe obi uto nke igba bọl n'ime ezinụlọ ya.
Ka Phil na-etolite, ọ malitere iso Etihad na nne ya na nna ya na ngwụsị izu ọ bụla, na-abụ abụ “Ọnwa na-acha anụnụ anụnụ site na Nguzo ” dị ka obodo ọ bụla ọzọ na-akwado ya.
Phil Foden nwere ike iji ejiji zuru ezu na City na-eji aka-acha anụnụ anụnụ na-acha anụnụ anụnụ ụbọchị niile. Ebe E Si Nweta: TheSun
Mmasị dị otú ahụ maka ụlọ ọrụ ahụ mere obere Foden ka ndị mụrụ ya nweta ya “Full Man City Kit ”. N'elu foto a, nne na nna Phil Foden zụtara ya ngwongwo nrọ ya Yiri ya na egwuregwu oge niile.
Ka agụụ mmekọahụ ya na-aga n'ihu n'oge ọ bụ nwata, ọ dịghị oge ọ bụla tupu nwa ahụ anabataghị akara ya ka ọ na-achọ ịghọ onye egwuregwu ịgba ọsọ egwuregwu.
Phil Foden Nwatakịrị Akụkọ Akụkọ - Ọzụzụ na Ọrụ Buildup:
Na mmalite, obere Phil maara na ya nwere nkà nke ime ihe ọ bụla na football. Mgbe o kesasiri ikike ya na olulu nke obodo Manchester gara n'ihu na-anwale ule na ulo akwukwo Man City.
Ọụ nke ndị mụrụ ya na ndị ezinụlọ ya ndị ọzọ amaghi oke n'oge Phil nyefere ule ya na agba agba.
Little Phil Foden sonyeere ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ nke Man City mgbe ọ dị obere nke 8. Playgba egwu maka klọb a pụtara ihe ọ bụla maka nwatakịrị nwoke nke enyerela usoro ziri ezi, gụnyere nnukwu nkwado ndị nne na nna iji zụlite nkà a mgbe ọ dị obere.
Phil Foden kpebiri ọdịnihu ya mgbe ọ bụ nwata. Ebe E Si Nweta Foto: Instagram
Dabere na ManChesterEveningNews, Phil Foden nwere ezigbo kpakpando site na mmalite ọrụ ya. Ọbụna ụlọ ọgbakọ ya (Citylọ Akwụkwọ Man City) enweghị ike inye aka ma gosipụta ekele ha maka ya na ndị otu ya.
Benjamin Mendy Childhood Story Plus Na-emeghe Eziokwu Ihe Akụkọ
Ị maara?… N'ịbụ onye ọ masịrị Phil na-eto eto, Man City FC na-achụ otu n'ime ụgbọ ala ha ama n'otu oge.a Limousine) maka obere Phil na ndị otu ya ka ha gosipụta oge ngwụcha nke egwuregwu nye ndị nkiri. Foto dị n'okpuru na-egosi ahụmịhe mbụ Foden nwere ụgbọ ala nke ụdịdị a.
Phil Foden gosipụtara na ọ dị mma n'oge ọ dị obere na Man City ga-achụrịrị limousine ha maka ya na ndị otu ya maka ngosi oge-oge. Ebe E Si Nweta: Paul Lunt.
Phil Foden Biography Eziokwu - Ndụ Ndụ Mmalite:
N'oge ọ dị afọ iri na ụma na ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ, Phil Foden tolitere bụrụ ihe eji egwu egwu whiz nwa onye na emeghi ihe ozo karia igho ndi nkasi obi.
A gọziri nwa amaala nke Manchester site na njikwa na njigide nke ndị iro gara aga. Ihe ịga nke ọma Phil Foden hụrụ ya na-ebulite ulo akwukwo a ngwa ngwa ka o na-agha agha megide ndi nile na emegide ya.
Phil Foden Ndụ Ndụ Ndụ na Obodo.
Ọ gara akwụkwọ gụrụ akwụkwọ mgbe ọ ka nọ n'ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ: Mgbe ọ na-egwuri egwu na Man City, nne na nna Phil Foden siri ọnwụ na nwa ha agaghị emebi iwu ya maka ọrụ football ya.
Na nzaghachi, Manchester City kpebiri inye Foden akwụkwọ. Clublọ ọrụ ahụ kwụrụ ụgwọ ụlọ akwụkwọ ya n'oge ọ gụrụ akwụkwọ na nzuzo Mahadum St Bede emi odude ke Whalley Range, Manchester, England.
Phil Foden Biography - tozọ a ma ama:
Nwatakịrị a nwere ikike na precocious mgbe ọ na-aga klas onwe ya na St Bede's College gara n'ihu na ihe ọ maara etu esi eme nke ọma - na-eme ka agụụ ya bụrụ ọrụ ya.
Mgbe ọ dị afọ iri na ụma, Phil ghọtara na iji nwee ihe ịga nke ọma, ọ dị mkpa ka ya nwee àgwà nka na ụzụ, obere ihu ọma na nke kachasị mkpa, ọ bụghị imerụ ahụ.
Dị ka anyị si mara, ọganihu Foden nke ntorobịa nke mbụ mgbe ọ nyeere ndị ntorobịa ya aka inweta ọkwá ahụ Neon iko. Na asọmpi ahụ, ndị ọgba bọọlụ kwere nkwa nata onyinye maka “onye ọkpụkpọ egwuregwu kachasị mma".
Maka ndị niile maara ya, ọ bụ ihe ịrịba ama na ọ meela ọkwa ya dị ka ndị na-agba ama agụmakwụkwọ.
Phil Foden gosipụtara ozugbo na ọ bụ otu n'ime ndị na-eto eto na City n'ihi nsọpụrụ ya.
Phil Foden Bio - Bilie na-ewu ewu:
"Man City Academy Chief Goal Creator" dị ka ọtụtụ ndị enyi kpọrọ aha ya ka a kpọrọ ka ọ nọchite anya U16 England ebe o mere mmetụta ozugbo.
N'ihe na-erughị otu afọ, Phil gara n'ihu na ndị otu England U17. Mụaka na-eto eto n'akụkụ Jadon Sancho na Callum Hudson-Odoi akpọrọ isonye na FIFA U-17 World Cup. N'okpuru ebe a bụ ntakịrị ngosipụta nke arụmọrụ Phil na asọmpi ahụ.
Ị maara?… Phil Foden enyereghị naanị England U17 aka bulie iko a, ọ mechara merie FIFA U-17 World Cup Golden Ball.
Ọzọkwa, ọganihu ntorobịa ya akwụsịghị ebe ahụ. Lucky Foden jidekwara Youngdị Onye Nlekọta Ndị Na - eto Egwuregwu BBC 2017 nturu ugo. N'okpuru ebe a, mpempe ihe akaebe foto.
Phil Foden Rise to Fame Story- Ọ meriri FIFA U-17 World Cup, FIFA U-17 Golden Ball na 2017 BBC Young Sports Personality of the Year.
N'oge ederede, a na-ahụta onye midfielder bụ onye a mụrụ dị ka onye na-eto eto na-eto eto na Man City Pep Guardiola na Gareth Southgate.
Phil so n'òtù ndị Man City meriri Treble- Premier League, FA na EFL Cup (+ FA Community Shield) niile na oge 2018/2019. Ndị ọzọ, dị ka anyị na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme.
Rebecca Cooke na Phil Foden Storyhụnanya Akụkọ:
Site na mmụba ya na amaokwu Bekee, ọtụtụ ndị egwu atụgharịala uche ịmata ma Phil Foden nwere enyi nwanyị ma ọ bụ ọ lụọla nwanyị. Eziokwu bụ, Phil alụbeghị nwanyị n'oge ederede mana o nwere enyi nwanyị.
N'azụ onye na-eme egwuregwu bọọlụ na-aga nke ọma, enwere enyi nwanyị na-adọrọ adọrọ nke aha ya bụ Rebecca Cooke. Dabere na Blogra Liverampup, ma Phill na Rebecca (eserese n’okpuru) amatala ibe ha kemgbe ụlọ akwụkwọ sekọndrị.
Zute Phil Nwanyi Nwanyị aha ya bụ Rebecca.
Phil Foden họọrọ ịbụ nne na nna mgbe ọ dị afọ 18, eziokwu dị obere maka ndị na-eto eto na-eto eto nke ogo ya na afọ.
Ya na ezigbo enyi ya nwanyị Rebecca nabatara ọmarịcha nwa nwoke na 24th nke Jenụwarị 2019. N'okpuru ebe a bụ foto nke Phil na nwa ya nwoke nke dị afọ iri na asatọ karịa nna ya.
Phil Foden sere onyinyo ya na nwa ya nwoke na-agba Krismas. Ebe E Si Nweta Foto: Instagram
Ị maara? N'oge ahụ Phil Foden ga-ala ezumike nká (ikekwe mgbe ọ dị afọ 36), nwa ya nwoke ga-abụ afọ 18 ma eleghị anya ọ bụ ndị otu egwuregwu bọọlụ.
Phil Foden Ndụ Nke Onwe:
Mata ihe gbasara ndụ Phil Foden ga - enyere gị aka ịmatakwu ụdị onye ọ bụ nke ọma na egwuregwu.
Malite na, ọ dịghị ụzọ dị mma ị ga-esi gbanahụ nrụgide nke enweghị ike ịnọdụ ala Kevin De Bruyne, David Silva, Bernardo Silva na İlkay Gündoğan.
Phil na-ahapụ nrụgide Man City site na ịga na-egbu oge na-azụ ụdị ụdị ọ bụla na ma ọ bụ na-enweghị ndị enyi ya. Lee ihe ntụrụndụ dị ịtụnanya o nwere!.
Anyị na-ewetara gị Ndụ nke Onwe Phil Foden na bọọlụ. Azu bu ihe mmasi ya.
Nakwa n'ihe gbasara ndụ Phil Foden, ọ nwere mmụọ mmesapụ aka na ya. Ndị na-agba ọsọ nde mmadụ n'agbanyeghị na ha mere ya na ndụ adịghị eche na ọ dị mkpa ịkwụsị ya site na ndị enyi ya na ndị nkuzi ụlọ akwụkwọ.
Kama ịzụta ụlọ, ụgbọ ala, Foden ka nwere ụfọdụ ego ya maka ndị ọ na-akọrọ nrọ ya.
Na foto dị n'okpuru, ndị na-agba ọsọ na-azụta ụfọdụ onyinye maka otu n'ime ndị nkuzi ya n'otu oge ọ gara ụlọ akwụkwọ a na Stockport ebe ụmụaka na-akụ ya.
Phil Foden nwere ịdị umeala n'obi. N'ebe a, ọ na-alaghachikwuru onye nkụzi ụlọ akwụkwọ ya.
Phil Foden Ndụ Ezinụlọ:
N'akụkụ a, anyị na-enye nghọta n'ime ndụ ezinụlọ Phil Foden. Bido, ndị ịgba ọsọ bọọlụ n'oge edere ka ya na nne na nna ya nọ n'agbanyeghị na ya na enyi nwanyị ya nwere nwa.
Ọganiihu Foden ekwela ka ezinụlọ ya kwapụ site na Edgeley, nke dị obere na ala ịta ahịhịa nke dị nso na Bramhall, bụ mpaghara bara ọgaranya na ndịda Manchester.
Banyere papa Phil Foden:
Na-esochi nwa ya nwoke nwere ike ịbụ nwatakịrị (afọ 18) iji wuo ụlọ ya na Rebeka enyi ya nwanyị, Nna Phil Foden, Phil Snr kwusiri ike na nwa ya nwoke ga-esoro ya na ndị ezinụlọ ya ndị ọzọ biri mgbe ha ghọrọ nne ma ọ bụ nna.
Phil Foden kwetara ibi n'ụlọ nna ya mgbe enyi ya nwanyị Rebecca nọrọ na mama ya.
Banyere Phil Foden's Mum:
Claire Foden bụ onye na-elekọta ụlọ nke na-anaghị eme ihe ọ bụla karịa ilekọta ụlọ ya anya nke ọma na ịhụ na nzụlite kwesịrị ekwesị nke obere Foden na nwanne ya nwanyị.
N'adịghị ka afọ ndị gara aga mgbe ọ na-elekọta obere ụlọ, Claire nwere obi ụtọ (dị n'okpuru ebe a) nwere ụlọ m 2m nke nwa ya nwoke zụtara ya na 2018 (TheSunUK Akụkọ).
Mama Phil Foden bụ onye na-erite uru dị ukwuu nke ụlọ m 2m nwa ya nwoke zụtara na obere mpaghara Stockport.
Banyere Nwanna Nwanyị Phil Foden:
Foden nwere nwanne nwanyị nke nwere ọtụtụ uru dị ịtụnanya ugbu a enwe otu nnukwu nwanne na-egwuri egwu na Premier League. N'okpuru ebe a bụ foto mbido na okenye nke Phil na nwanne ya nwanyị nwere ike mara ya karịa onye ọ bụla ọzọ.
Zute Nwanne Nwanne Phil Foden. Image Instagram
Nwa nne Phil Foden:
Mmetụta nke inwe nne na nna ochie ka dị ndụ mgbe ha mechara ka ọ bụrụ ọrụ gị dị ịtụnanya. Nke a bụ ihe gbasara Phil Foden nke aka anyị. Onyinye kasịnụ ọ na-enye nke ya nne nne bụ ịhụnanya na nkwado na-enweghị atụ.
Zute nne nne Phil Foden bụ onye hụrụ ihe ịga nke ọma nwa nwa ya. Ebe E Si Nweta: IG
Phil Foden LifeStyle Eziokwu:
Na Disemba 2018, Foden bịanyere aka na nkwekọrịta ya na Manchester City nke hụrụ ya ka ọ na-akwụ ụgwọ buru ibu nke 1.7 Million Euro (1.5 Million Pound) kwa afọ.
Nke a bụ ihe na-egosi na ọ bụ nde ndị nde amaala nakwa na o tozuru oke ibi ndụ dị oke ọnụ.
Agbanyeghị, Phil Foden n'oge edere ka a maara na ọ bụ ihe mgbochi maka ibi ụdị ndụ ọpụrụiche, otu a na-ahụkarị nke ọma na aka jupụtara oke aka, akwa, ụgbọ ala na nnukwu ụlọ niile maka onwe ya, wdg.
N'agbanyeghị na ịnata £ 30,241 na ụgwọ ọrụ kwa izu, ndị ịgba bọọlụ na-ahọrọ iyi uwe dịkarịsịrị. N'ezie, nke a bụ otu ya ụlọ ọ dị ka oge ahụ ọ bara ọgaranya.
Foden na-ebi ndụ LifeStyle dị umeala n'obi n'agbanyeghị na ọ na-akwụ ụgwọ kwa afọ nke 1.7 Million Euro na, 30,241 kwa izu.
Eziokwu Phil Foden:
O nwere akwukwọ Guinness of Record:
Phil Foden esonyela n'egwuregwu bọọlụ ochie Pele na Lionel Messi jigide Akwukwo Guinness nke Ndekọ.
Phil Foden nwere Guinness World Record. Ebe E Si Nweta: GuinnessWorldRecord na Pinimg
Ị maara?… Foden nwere ndekọ dị ka Nwa egwuregwu bọọlụ nke obere iji merie Premier League. Dabere na akwụkwọ ama ama ama ebipụtara, aha Phil Foden ga-ebipụta na mbipụta 2020 nke usoro ya.
Fdị Phil Foden:
Anyị niile maara na omenaala Tattoo bụ ihe ama ama n’ụwa bọọlụ taa ka a na-ejikarị ya egosipụta okpukpe mmadụ ma ọ bụ ndị ha hụrụ n’anya.
Phil Foden n'oge edere abụghị egbugbu. Ọ nwere ink na-adọrọ n'aka nri ya nke na-egosipụta agụụ ya, nkwado nkwado na ihe ndị ọzọ.
Phil Foden tupu foto na mgbe ọ nwụchara. Ebe E Si Nweta Foto: Twitter
Ọ bụ otu n'ime mmalite nke mmalite nke narị afọ: Ndị nrịba ama nwere mgbọrọgwụ ezinụlọ White Bekee mụrụ na mmalite nke narị afọ iri ọhụrụ (Afọ 2000).
Nke a bụ otu afọ ebe ọgbaghara teknụzụ dịka anyị kwuburu na ọ ga-eme eme- emeghị n'ezie.
Gwa eziokwu!… onweghi mgbe ojoo ojoo miliki Y2K. Airgbọ elu, dịka e buru n’amụma na-agaghị esi n’eluigwe daa, ha adaghị. Ọbụna ogbunigwe agbapụghị na mberede na n'ikpeazụ, ịhazigharị ụbọchị nke kọmputa anaghị eme.
Religion: Banyere mpaghara ya, Phil Foden bụ onye Katọlik ma a zụlitere ya n'ụlọ ezinaụlọ Katọlik. Eziokwu a na - akọwara ụlọ akwụkwọ St-Bọn nke Roman Katọlik na-agụkọ akwụkwọ.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ Phil Foden Childhood Story Plus Untold Biography Eziokwu. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ.
Ndi a na-akpọ nne ochie Phil ka Billy wee biri na Robinson Street Edgeley?
Ahụghị ihe ọ bụla ebe a gbasara nna ya na-agbakasị ụlọ na 1990s, ezinụlọ klas ya? Pmsl na-akpa àgwà